SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
JOSEFA WEKUARIMATIYA aisafunga kuti aiva neushingi hwekuenda kunotaura nagavhuna weRoma. Pondiyo Pirato aizivikanwa semunhu akaoma musoro chaizvo. Kunyange zvakadaro, kuti Jesu avigwe zvine ruremekedzo, mumwe munhu aifanira kukumbira Pirato kuti amubvumire kutora mutumbi waJesu. Pavakaonana, Pirato haana kuomesa musoro sezvingangodaro zvaifungidzirwa naJosefa. Pashure pekunge Pirato anzwa nemumwe musoja kuti Jesu akanga afa, akabvumira kuti mutumbi wake utorwe. Saka iye zvino, kunyange zvazvo Josefa ainge akasuruvara nezvakanga zvaitika, akadzokera nekukurumidza kwakaurayirwa Jesu.​—Mako 15:42-45.
Josefa wekuArimatiya aimbova ani?
Aizivira Jesu kupi?
Uye nei uchifanira kuziva nezvenyaya yake?
NHENGO YEDARE RESANIHEDRINI
Evhangeri yakafemerwa yaMako inoti Josefa aiva “nhengo yeDare yaiva nomukurumbira wakanaka.” Dare iri rinofanira kunge riri Sanihedrini, dare repamusoro revaJudha uye raiva nesimba pahurumende. (Mako 15:1, 43) Saka Josefa aiva mumwe wevatungamiriri vevanhu vekwake, izvo zvinofanira kunge zvakaita kuti akwanise kutaura nagavhuna weRoma. Hazvishamisi kuti Josefa aivawo mupfumi.​—Mat. 27:57.
Une ushingi here hwekuzivisa kuti uri muKristu?
Dare reSanihedrini raivenga Jesu. Nhengo dzaro dzakaronga kuti aurayiwe. Zvisinei, Josefa anonzi “murume . . . akanaka uye akarurama.” (Ruka 23:50) Kusiyana nevakawanda vaaishanda navo mudare reSanihedrini, iye aiva munhu akatendeka uye aiita zvese zvaaigona kuti ateerere mirayiro yaMwari. “Akanga akamirirawo Umambo hwaMwari,” uye ndizvo zvinofanira kunge zvakaita kuti ave mudzidzi waJesu. (Mako 15:43; Mat. 27:57) Anofanira kunge aifarira mashoko aJesu nekuti aikoshesa chokwadi nekururama.
Johani 19:38 inoti Josefa “akanga ari mudzidzi waJesu asi wepachivande nokuti aitya vaJudha.” Josefa aityei? Aiziva kuti vaJudha vaivenga Jesu uye vainge vakatsunga kuita kuti chero munhu aibuda pachena kuti aitenda muna Jesu adzingwe musinagogi. (Joh. 7:45-49; 9:22) Kudzingwa musinagogi kwaireva kuti munhu aizovengwa uye aisazogamuchirwa nevamwe vaJudha. Saka Josefa aizeza kubuda pachena kuti aitenda muna Jesu. Kubuda pachena kwaizoita kuti arasikirwe nechinzvimbo chake nemukurumbira wake.
Josefa haasiriye ega aiva mumamiriro ezvinhu akadaro. Maererano naJohani 12:42, “vazhinji vevatongi vakatenda maari [Jesu], asi nokuda kwevaFarisi vakanga vasingamubvumi pachena, kuti varege kudzingwa musinagogi.” Mumwe aiva mumamiriro ezvinhu akadaro ndiNikodhimo, uyo aivawo nhengo yedare reSanihedrini.​—Joh. 3:1-10; 7:50-52.
Zvisinei, Josefa aiva mudzidzi, asi aisakwanisa kuzvitaura akasununguka. Iri raiva dambudziko rakakura, kunyanya tichifunga nezvemashoko aJesu ekuti: “Munhu wose anobvuma kuti ari pamwe neni pamberi pevanhu, iniwo ndichabvuma kuti ndiri pamwe naye pamberi paBaba vangu vari kumatenga; asi munhu wose anondiramba pamberi pevanhu, iniwo ndichamuramba pamberi paBaba vangu vari kumatenga.” (Mat. 10:32, 33) Josefa haana kuramba Jesu, asi haana kuva neushingi hwekubvuma kuti aimuziva. Ko iwe unahwo here?
Josefa akaita zvakanaka sezvinotaurwa neBhaibheri kuti haana kutsigira zvakanga zvarongerwa Jesu neSanihedrini. (Ruka 23:51) Zvichida sezvinofungwa nevamwe, Josefa akanga asipo paitongwa Jesu. Chero zvazvingava, Josefa anofanira kunge akarwadziwa nekubatwa zvisina kururama kwakaitwa Jesu, asi hapana zvaaigona kuita.
AKAZOKWANISA KUITA CHISARUDZO
Zviri pachena kuti pakazofa Jesu, Josefa akanga asisatyi uye akasarudza kutsigira vateveri vaJesu. Chisarudzo ichocho chinoratidzwa mumashoko ari pana Mako 15:43 ekuti: “Akashinga kuenda pamberi paPirato, akakumbira mutumbi waJesu.”
Zvinoita sekuti Josefa akanga aripo Jesu paakafa. Akatotangira Pirato kuziva kuti Jesu akanga afa. Ndokusaka Josefa paakakumbira mutumbi, gavhuna Pirato “akashamisika kana [Jesu] akanga atofa.” (Mako 15:44) Kana Josefa akaona Jesu achirwadziwa ari padanda rekutambudzikira, izvozvo zvakaita kuti azviongorore uye asarudze kutsigira chokwadi here? Zvinogona kudaro. Chero zvazvingava, Josefa akanga ava kuda kuita chimwe chinhu. Aisazoramba ari mudzidzi wepachivande.
JOSEFA ANOVIGA JESU
Mutemo wechiJudha waiti vaya vainge vatongerwa rufu vaifanira kuvigwa zuva risati ravira. (Dheut. 21:22, 23) Asi sezvaiitwa nevaRoma, mitumbi yemakororo maviri inogona kunge yakasiyiwa payakarovererwa ipapo ichiora kana kuti yakakandwa muguva revanhu vakawanda. Asi handizvo zvaifungwa naJosefa pamusoro paJesu. Josefa aiva neguva rainge rakacherwa padombo pedyo nepakaurayirwa Jesu. Guva iri rakanga risati ramboshandiswa, zvichiratidza kuti Josefa akanga achangobva kutamira kuJerusarema achibva kuArimatiya * uye anofanira kunge aitarisira kuti guva iri rizovigwa mhuri yake. (Ruka 23:53; Joh. 19:41) Josefa akaratidza rupo paakaita kuti Jesu avigwe muguva rake uye akazadzisa uprofita hwekuti Mesiya aizovigwa “pamwe chete nevapfumi.”​—Isa. 53:5, 8, 9.
Pane chimwe chinhu chaunokoshesa here kupfuura ushamwari hwako naJehovha?
Evhangeri dzese dziri ina dzinotaura kuti pashure pekunge mutumbi waJesu wabviswa padanda, Josefa akaumonera nejira rerineni uye akauradzika muguva rake. (Mat. 27:59-61; Mako 15:46, 47; Ruka 23:53, 55; Joh. 19:38-40) Munhu mumwe chete anotaurwa zvakananga kuti akabatsira Josefa ndiNikodhimo, uyo akauya nezvinonhuwirira zvaishandiswa pakuviga munhu. Sezvo varume vaviri ava vaiva nemukurumbira, vanofanira kunge vasina kutakura mutumbi waJesu ivo pachavo. Vanofanira kunge vakashandisa vashandi kuita basa rekutakura mutumbi nekuuviga. Kunyange kuri kuti vakashandisa vashandi, basa rakaitwa nevarume vaviri ava rainge rakakura. Chero ani zvake aibata chitunha aibva ava munhu asina kuchena kwemazuva 7, zvichiita kuti chese chaaibata chive chisina kuchena. (Num. 19:11; Hag. 2:13) Pakadaro aifanira kugara kure nevamwe muvhiki rePaseka uye aisafanira kuva pamitambo yese yekupemberera Paseka. (Num. 9:6) Nekuronga kuti Jesu avigwe, Josefa aigona kuzoshorwa nevaaishanda navo. Kunyange zvakadaro, ainge agadzirira kugamuchira chero zvaizoitika nemhaka yekuviga Jesu zvine ruremekedzo uye kubuda pachena kuti aiva mumwe wevadzidzi vaKristu.
KUPERA KWENYAYA YAJOSEFA
Kubva panoperera nhoroondo yekuvigwa kwaJesu hapana patinozonzwa muBhaibheri pachitaurwa nezvaJosefa wekuArimatiya, zvichiita kuti pave nemubvunzo uri pachena wekuti: Chii chakazoitika kwaari? Chokwadi ndechekuti hatizivi. Zvisinei, tichifunga zvatakurukura, anofanira kunge akazvizivisa pachena semuKristu. Kupfuura zvese, paakasangana nemiedzo, kutenda kwake uye ushingi hwake zvakaramba zvichiwedzera kwete kuderera. Ichocho chaiva chiratidzo chakanaka.
Nyaya iyi inoita kuti pave nemubvunzo watingaita zvakanaka kufunga nezvawo wekuti: Pane chimwe chinhu here, chingava chinzvimbo, basa, zvatiinazvo, kuda vemumhuri, kana kuti kunyange rusununguko rwedu, chatinokoshesa kupfuura ushamwari hwedu naJehovha?
^ ndima 18 Arimatiya inofanira kunge iri iyo Rama, yava kunzi Rentis (Rantis). Ndiro taundi raigara muprofita Samueri, raiva makiromita 35 kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweJerusarema.​—1 Sam. 1:19, 20.
Chitunha chaJesu Chinogadzirirwa Kuti Chivigwe